‘प्रकृती बिना जीवन छैन’ भन्दै तस्बिर राखेको ३० मिनेटमा प्रकृतीले नै लियो डा. दीपाको ज्यान (भिडियो) – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचार‘प्रकृती बिना जीवन छैन’ भन्दै तस्बिर राखेको ३० मिनेटमा प्रकृतीले नै लियो डा. दीपाको ज्यान (भिडियो)
सोशल मीडियामा दीपाको तस्वीर मान्छेहरूले मन पराएका छन् । यस यात्राको आनन्द उनको अनुहारमा पनि देखिन्थ्यो, तर कसैलाई थाहा थिएन कि यो अन्तिम तस्वीर हो। सोशल मीडियामा उनका प्रशंसकहरू ३४ वर्षीया दीपा शर्माको आ-कस्मिक नि’धनबाट दु’खित बनेका छन् । भिडियो